Xildhibaan hore Furux, oo ku baaqay in aan looga sii darin xaaladda Galmudug – Kalfadhi
Xildhibaan hore Furux, oo ku baaqay in aan looga sii darin xaaladda Galmudug
Maxamed Jaamac Furux, oo soo noqday Wasiiru-dowlihii hore ee Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda iyo Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay banaanbaxyada iyo cabashada ka soo baxeysa dadka dega magaalada Cadaado ee gobalka Galgaduud.
Xildhibaan Furux, ayaa ugu baaqay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in aysan uga sii darin xaaladda Galmudug oo hadda ka soo hagaageyso sidii ay aheyd 2 sano ka hor maadaama ay is fahmeen hogaanka dowladda Dhexe iyo madaxda Galmudug.
“Waxaan ugu baaqayaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya in aan looga sii darin xaaladda Galmudug oo kolba dhinac u liiceysa, aadna looga fikiro dhismaha Galmudug loo dhanyahay”ayuu yiri Maxamed Jaamac Furux oo wareysi gaar ah siiyay Kalfadhi.
“Isfahamka madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug waxay bilaaw u yihiin caafimaadka Galmudug marka in aysan wadada Galmudug markale jahwareerin” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Maxamed Jaamac Furux oo ka soo mid noqday Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya islamarkaana degaan doorashadiisa aheyd Galmudug.
Dhanka kale Odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado ayuu ugu baaqay in ay sameeyaan tanaasul badan si loo gaaro maslaxd waarta loona dhiso maamul ay u dhanyihiin shacabka Galmudug.
“Odayaasha dhaqanka Cadaado waxaan ugu baaqayaa in ay tanaasul sameeyaan calooshana xirtaan si loo helo Galmudug caafimaad qabta” ayuu yiri Xildhibaan hore Furux.
“Hogaanka dowladda Soomaaliya waa in ay lahaadaan ballan, hadii balan jirin diin ma jirto”ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan hore Maxamed Jaamac Furux, oo sidoo kale soo noqday Wasiiru-dowlihii hore ee Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ee dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo u mahadceliyay Guddiga Qabanqaabada Maalmaha Xorriyadda
Aqalka Sare oo Bulshada Rayidka ah ka qayb gelinaya dood ku saabsan Sharci ay usoo gudbisay Wasaaradda Caafimaadka